Ny lahatsoratr'i Amalie Widerberg momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Amalie Widerberg
Amalie Widerberg dia miasa amin'ny maha Digital Marketer ao amin'ny FotoWare, mpivarotra manerantany Digital Asset Management (DAM). Manana mari-pahaizana Masters ESST (Society, Science and Technology in Europe) izy ary maminavina fa 2021 dia be ny zavatra miandry ho an'ny tontolon'ny DAM.
Alarobia, Febroary 10, 2021 Alarobia, Febroary 10, 2021 Amalie Widerberg
Hifindra any amin'ny 2021, misy fandrosoana vitsivitsy mitranga amin'ny indostrian'ny Digital Asset Management (DAM). Tamin'ny taona 2020 dia nanatri-maso fiovana goavana tamin'ny fahazarana miasa sy ny fitondran-tenan'ireo mpanjifa izahay noho ny covid-19. Raha ny filazan'i Deloitte, dia nitombo avo roa heny ny isan'ny olona miasa tao an-trano tany Suisse nandritra ny areti-mandringana. Misy ihany koa ny antony hinoana fa ny krizy dia hiteraka fitomboana maharitra amin'ny asa lavitra amin'ny sehatra manerantany. McKinsey koa dia nitatitra momba ny mpanjifa manosika mankany amin'ny